Wagqugquzelwa uyise ochushisa abantu ngezentela
UNKK Busisiwe Mdletshe ongumsunguli nesikhulu esiphezulu senkampani eyenza izinto ezithintha intela, iBtmt Capital
PHILI MJOLI | January 17, 2020
UKUCATHULISWA akukhona okwabantu abasafika ebhizinisi, nabantu asebenesikhathi eside bayamdinga umuntu ozohlala ekhona njalo.
Lokhu kushiwo uNkk Busisiwe Mdletshe ongumsunguli nesikhulu esiphezulu senkampani esiza ngezinto ezithinta intela, iBtmt Capital enamahhovisi eSandton.
UNksz Mdletshe odabuka eNgonyameni, ngaseMlaza, usungule le nkampani ngo-2014. Uthe uma usebenza kunomuntu ohlale ekubhekile ukuthi umsebenzi owuqashelwe uwenza ngokuyikho yini, uma ebona ukuthi uphuma endleleni akuqondise noma akuzamele usizo lokuthi kuthuthukiswe ikhono lakho. Kodwa uma sewunenkampani yakho akekho umuntu osuke eme emuva kwakho, ebheke lokho. Uthe uma ungazange uzitholele umuntu ozokweluleka ungenza amaphutha amaningi.
“Ngikholwa ukuthi nakuba sengikhulile ebhizinisini, ngisamdinga umuntu osemkantshubomvu kuleli bhizinisi ngoba izinselelo zalo uzazi kangcono. Ngizimisele ukuthi ahlale ekhona umuntu ongelulekayo,” kusho yena.
UNksz Mdletshe uthe ngesikhathi eqeda * -matric wayengazi ukuthi uzofundelani ngoba esikoleni ayefunda kuso wayengekho umuntu owayebeluleka ngamikhakha abangayifundela.
“Izifundo zami zazixovekile, ngenhlanhla kwakukhona iMaths kuzo futhi ngiphase kahle, amaphuzu ami engivumela ukuthi ngingene enyuvesi. Ngakhetha ukwenza iBcom yize ngangingazi lutho ngayo. Ngekota yokuqala ngathwala kanzima, ngasizwa abangani bami ababehla-kaniphile futhi beqonda kahle ukuthi lo mkhakha uzosifikisa kuphi. Kwaphela unyaka nami sengiqonda kahle kodwa ngaba nenye inselelo yokuthi imali yokuqhubeka yayingasekho,” kusho yena.
Uthi uyise wathatha impesheni ngaphambi kwesikhathi ukuze afunde.
“Ukwazi ukuthi kunomuntu owesule emsebenzini ukuze ngifunde kwangifakela ingcindezi enhle yokuthi kumele ngizimisele ngokuphindaphindiwe. Ngaphumelela ngase ngithola ithuba lokuthi ngiyokwenza uqeqesho-msebenzi enkampanini ecwaninga amabhuku iPricewaterhouse Coopers, ecwaninga amabhuku ezinkampani, ezomasipala nezikhungo zikahulumeni.”
Ngokuhamba kwesikhathi, uthe waqashwa yisikhungo sokuqoqwa kwentela iSouth African Revenue Services (Sars).
“Ukusebenza kulesi sikhungo kwangenza ngazibuka ngenye indlela izinto. Ngabona ukuthi abanye abantu abangayikhokhi intela basuke bengenalo ulwazi olwanele ngayo, akukhona ukuthi basuke bebaleka. Ngabona ithuba lokuthi ngiqale eyami inkampani yokubeluleka ngiphinde ngifundise osomabhizinisi abancane ngentela. Ngaqala ngagxile kosomabhizinisi abancane nabantu abasebenzayo, manje senginamakhasimende ayizinkampani eziphakathi nendawo nabantu abasebenzela ezinkampanini ezingaphezulu kweyodwa nabathenga amasheya ezinkampanini. Ngisiza izinkampani ukuthi zidwebe amasu azo ebhizinisi nokuthi zingenza kanjani ukuze zimelene nezimbangi zazo ebhizinisini,” usho kanje.
Ngaphandle kwalokhu, uthe unenhlangano esiza abafundi baseNgonyameni abasesimeni esinjengesakhe, sokungazi ukuthi kumele bakhethe muphi umkhakha nokuthi izifundo zabo kumele bazihlele kanjani. Uthe bangu-250 abafundi abasizakala kule nhlangano yakhe.